China Dongshen omenala omenala onwe labelụ elu mma softtip badger ntutu resin na -eji aka na -akpụ afụ ọnụ ihu nwoke na -emepụta ihe na onye na -ebubata ya | Dongmei
Dongshen omenala omenala onwe labelụ elu mma softti silvertip badger ntutu resin aka nwoke ihu shaving ahịhịa.
Ahịhịa ịcha afụ ọnụ Dongshen bụ nke ejiri ajị Silvertip eke na aka resin mee. Eji ya mee ka ajị agba dị nro tupu ịkpụ afụ ọnụ, na -enweghị mgbakasị ahụ. Enweghị ntutu isi ọ bụla, enweghị mpe mpe mpe mpe mpe mpe akwa, na -eme ka enyi gị na -adigide na -eme emume ịkpụ afụ ọnụ gị kwa ụbọchị.
Kemgbe ihe karịrị afọ iri anọ, Dongshen arụpụtala ihe kacha mma maka ịkpụ afụ ọnụ na ngwa mma ụmụ nwoke mara mma. Anyị abụrụla onye ndu n'ịkpụpụta ihe ọhụrụ na imepụta ahịhịa, na -ahụ na emepụtara ngwaahịa anyị ọ bụla ka ọ bụrụ ọkwa kachasị elu.
Ihe nketa anyị siri ike na ọchịchọ ịnye ngwaahịa dị mma na -apụta na ntinye anyị na afọ ojuju ndị ahịa anyị n'ihe ọ bụla bu aha anyị.
Akụrụ ọnụ ihe Ajị badger (ajị ajị ọlaọcha).
Aka ihe Remmehie mmehie, ma ọ bụ ahaziri
Nha eriri Anyị nwere ike rụpụta dịka arịrịọ gị si dị
Jikwaa ụcha Blue, ma ọ bụ rụpụta dịka arịrịọ ndị ahịa si dị
Akara Dongshen ahịhịa, ma ọ bụ cna -akwụ ụgwọ design logo ga -adị
Mbukota Igbe akwụkwọ ọcha /ojii
Ịkwụ ụgwọ Nkwenye ahia, T/T, Western Union, Paypal
Oge Mbuga ozi 30-45 ụbọchị mgbe nnata nke ụgwọntinye
Brush Ahịhịa e ji aka mee nke nwere ntutu nchara 100% - Oke dịkwa oke. Ụmụ nwoke mara mmaNchacha afụ ọnụ, mana Ụmụnwaanyị masịrị ya!
Soap Na -eji ncha ịcha afụ ọnụ kacha amasị gị. Ntutu Badger anyị kachasị mma bụ baajị ọla ọcha kacha mma, na eriri ahịhịa anyị ejiri aka mee ga -adịru ọtụtụ afọ mgbe a na -elekọta ya nke ọma.
● Kpọọ ahịhịa nke ọma maka ịbawanye ndụ ahịhịa na ịrụ ọrụ.
● Mgbakwunye dị mma na ngwa ịkpụ afụ ọnụ / setịpụ afụ ọnụ ọ bụla.
Ntutu Badger Silvertip
Ezi brushes nwere ezigbo ntụpọ na -acha ọcha nke na -acha, na -agbacha agbacha, na -enye ohere maka ijigide mmiri. Na -enyocha otu n'ime brushes ndị a na -akpụ afụ ọnụ tupu ịzụrụ iji jide n'aka na ị nwetara ezigbo ego. Ọ bụ ihe nwute na ọ bụ ihe a na -ahụkarị maka ntutu kachasị mma ka ịcha ọcha na njedebe ya dị ka ntutu ọla ọcha. Ọ bụ ezie na badger na superti badge bụ brushes kacha mma, baajị silvertip bụ nke kachasị ọnụ na nke okomoko n'ihi ụkọ ya, ọfụfụ na njigide mmiri dị elu.
Iji chọpụta ma ahịhịa na -ebu ezigbo ntutu ntutu 'silvertip' ịkwesịrị inyocha agba nke ndụmọdụ ahụ dị nro. Ezi ahịhịa 'silvertip' nwere ndụmọdụ na-adịghị ọcha.
Ọ dịghị ihe na -akpụcha dị ka Dongshen - N'ime ihe karịrị afọ 40 Dongshen bụ nhọrọ doro anya!
Dongshen na -enye nhọrọ sara mbara brushes aka aka. A na -enweta brushes anyị n'ụdị dị iche iche na ụdị bristle iji mezuo mmasị ọ bụla. Njupụta na ịdị nro nke bristles na -emetụta mmịpụta, mmiri ole ahịhịa na -ejigide ya, na ọkpụrụkpụ larịị e kere.
Bash Badger ọla ọcha bụ ọkwa badger kachasị dị nro. Ha na -ejide oke mmiri wee mepụta ọmarịcha mmiri. Ọtụtụ ndị na -akpụcha mmiri na -ahọrọ brushes badger silvertip n'ihi ịdị nro ha. Ndị ọzọ na -ahọrọ akara nrịbama siri ike, ọkachasị ndị nwere akpụkpọ ahụ na -emetụ n'ahụ.
Dongshen na-akpụcha ahịhịa site na iji naanị ihe kacha mma.
Nke gara aga: Dongshen elu mma eke siri ike abụọ gbalaga badger ntutu resin aka omenala logo ikom mmiri shaving ahịhịa
Osote: Dongshen na -akpụcha ahịhịa kacha mma baajị ntutu na -acha anụnụ anụnụ resin na -ejikwa akara nkeonwe nha nha ahịhịa ụmụ nwoke
onwe labelụ ịcha ahịhịa
Ịchacha ahịhịa Silvertip
ahịhịa ịcha afụ ọnụ
Dongshen 7pcs pink etemeete ahịhịa setịpụrụ ụlọ nyocha nkeonwe ...
Ahaziri onwe labelụ green etemeete ahịhịa set ...
Ahaziri onwe labelụ N'ogbe 12pcs rose r ...
Eco-friendly 8pcs eke achara handle etemeete ...
Dongshen etemeete ahịhịa sịntetik ntutu ntutu metal aka ...
Dongshen elu àgwà nwa plastic handle synt ...
Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Nịm etemeete ahịhịa, etemeete ahịhịa setịpụrụ, Mee Ncha, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, Ịkpụ afụ ọnụ,